PressReader - Zululand Eyethu: 2017-11-23 - Lushisa phansi olokuchibiyela
Lushisa phansi olokuchibiyela
Zululand Eyethu - 2017-11-23 - NEWS • IZINDABA - Larry Bent­ley
ZONKE izindlela zi­zobe zib­heke eMlalazi kuWadi 10, njen­goba abavoti be­zobe be­ma­gange ngoku­votela amaqembu abawathan­dayo, okheth­weni lokuchibiyela, olu­zoba ngoLwe­sithathu lomh­laka 29 Novem­ber.
Njen­goba kun­abavoti abangu-4 659 ase­beb­hal­isile, lesi sikhala savuleka nge­muva kokud­lula emh­labeni kweKhansela lesigceme, nelalin­gusih­lalo we­gat­sha likaKhon­golose, uMnuz. Mbuyiseni Zwane (47), owashona nge­muva kokux­inwa wukugula. Umufi uZwane wan­qoba lolukhetho, emele i-ANC okheth­weni loHu­lu­meni basekhaya ol­walun­gonyaka ka-2016, nalapho ok­wa­phuma khona abantu abalin­gan­iselwa ku-59.85.%.
Labo ase­beb­halisele amavoti ay­isipesheli bazovota ngoLwe­si­bili, lomh­laka 28 Novem­ber. Mane amaqembu azobanga lolukhetho. Owokuqala ozobe emele i-ANC nguThokozani Ziqubu, Mavis Md­luli weDA, Siyabonga Ntombela we-EFF noSi­bonakaliso Mdlet­she we-IFP.
By-elec­tion fever hits uMlalazi Ward 10
Sekubonakala ngazo lezi zingqwembe ukuthi ukhetho lushube kan­gakanani